Deposit, Withdrawal & Transfer Fund FAQs | gt.io | Africa
DHIGASHO, LA BIXIS IYO
SU'AALAHA LACAG WAREEJINTA
DHIGASHO, LA BIXIS
/ Dhigashada, Kala bixitaanada iyo Wareejinta Lacagaha
1. Sidee ayaan ugu shubi karaa lacago koontadeyda?
Si aad lacago ugu shubatid waa inaad marka koowaad gashaa aagaaga illaalsan (Bogga Macaamiisha). Kadib raac midkood dooqyada hoose:
1. Markaad soo gasho aaggaaga ilaashan, ku dhufo badhinka 'Dhigasho' ee calamaadsan.
2. Dooro qaabka Lacag dhigashada la doorbiday.
3. Dooro lacagta ewallet ee aad rabtid inaad wax ku shubtid oo buuxi goobaha muhiimka ah.
4. Dhameystir tallaabooyinka dheeraadka ah ee la codsaday, kuwaasoo ku xiran lacag bixiyaha.
1. Markaad soo gasho aaggaaga ilaashan, ku dhufo badhinka 'Dhigasho' ee ku yaal ewallet kasta.
2. Illaa intee ayay qaadataa in lagaga shaqeeyo lacag dhigashadayda?
Waqtiga hawshu wuxu ku xiran yahay qaabka lacag bixinta, oo waxaa laga heli karaa boggayaga Dhigashada iyo La Bixista page. Intaas waxaa dheer, waqtiga hawlgalku wuu dheeraan karaa hadii aanu u baahano inaanu codsano macluumaad dheeraada.
3. Lacagahee ayaan dhigan karaa?
Waxaad dhigan kartaa USD, EUR, JPY, BTC, ETH iyo USDT. Fadlan ogow in lacagaha la dhiganayo ay kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran nooca lacag bixinta, taasoo laga heli karo Lacag dhigasho iyo Kala bixitaanka.
4. Miyay jiraan wax xadad Lacag Dhigasho ama La Bixiseed oo ay tahay inaan ka warqabo?
Xadadka Lacag dhigashada iyo La Bixistu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran habka lacag bixinta. Fadlan booqo bogga Lacag dhigashada iyo Kala bixitaanka wixii warbixin dheeraad ah.
5. Miyaan lacag dhigan karaa anigoo isticmaalaya hab aan magacayga ku qornayn?
Maya, ma aqbalno lacag dhigashada qolyaha saddexaad. Magaca soo diraha waa inuu u dhigmaa magaca ka diiwaangashan gt.io. Lacag dhigashada ka yimaada qolo saddexaad lama aqbalayo waxaana lagu celin doonaa meeshay markii hore ka yimaadeen.
6. Miyaan u baahannahay inaan bixiyo wax macluumaad dheerada oo kale haddii aan lacagta kaga soo shubo Kaadhka Debit/Credit.
Haa, kadib markaad si guul leh lacagta ugu shubatid marka ugu horeysa adigoo isticmaalaya Debit/Credit Kaadh, waxa lagu waydiin doonaa inaad keentid sawir waadax oo dhanka hore iyo gadaasha kaadhka ah muujinayana macluumaadkan soo socda si loo xaqiijiyo lacag bixintaada:
Magaca kaar haystaha, oo ay tahay inuu la mid noqdo magacii diiwaangelinta loo adeegsaday.
Magaca bangiga soo saarey.
4ta xaraf ee ugu dambeyso lambarka kaarka.
Taariiqda kaarku dhacayo.
Saxiixa kaar haystaha.
Fadlan hubi in CVC/CVV ay qarsoonaato. Tusaale ayaa lagu bixin doonaa inta hawsha lacag Debit/Credit kaadh ku dhigashada lagu jiro aaggaaga ilaashan.
7. Miyaan u baahannahay inaan bixiyo macluumaad dheeraada hadii aan lacagta kaga soo Shubasho Wallet Elegtarooni/dhijitaal ah?
Marka habka lacag bixintaadu tahay mid dhijitaal ah/ewallet la soo dhex marinayo, ciwaanka iimaylka soo diruhu waa inuu la mid ahaadaa iimaylkii diiwaangelinta loo adeegsaday. Xaaladahaas oo kale, habkaaga lacag bixinta si otomaatig ah ayaa loo xaqiijinayaa. Haddii ciwaanka i-meelka soo diruhu uusan la mid ahayn i-meelkii loo adeegsaday iiwaangelinta, waa inaad bixisaa cadeynta milkiilanimada koontada adiga oo ka soo dirayo bayaanka ama shaashada koontadaada dhigitaalka/e-wallet, halka magaca barbardhigmo magaca koontadaada ee ka diiwangashan gt.io. Haddii tani aanan la bixin, Lacag dhigashadaada waxaa loo tixgelinayaa lacag ka timi qolo saddexaad, oo dhammaan lacagaha waxaa dib loogu celinayaa isha koowaad.
Fadlan ka taxadar qaar ka mid ah dhijitaalka/e-wallets waxay u baahan karaan tallaabooyin dheeraad ah. Tilmaamo cad ayaa laga heli karaa aagaaga illaalsan markii aad bilowdid Lacag dhigasho adiga oo isticmaalayo dhammaan qaababka.
8. Miyaan u baahannahay inaan bixiyo macluumaad dheeraad ah haddii aan hadii aan lacagta kaga soo shubo Xawilaad Bangi?
Markii aad dhameystirtid tallaabooyinka lagu sharxay aagaaga illaalsan, waxaa lagu siinayaa dhammaan sharaxaadaha Koontadeena/koontooyinka Bankiga, oo aad ka soo saareysid koodhka/lambarka tixraaca. Markii aad tilmaamo siisid Bangigaaga, waa inaad hubisaa in koodhka tixraaca lagu daray dalabka, marka xafiiskeena bangiga wuxuu ogaanayaa in koontada soo diraha uu la jiraa gt.io.
Wareejinada bangiga waxaa caadi ahaan lagu dhammaystiraa 2-5 maalmood ganacsi gudahood ee ka bilaabaneyso taariiqda lacagaha la diray, laakin tani waxay qaadan kartaa waqti dheer, waxay ku xirantahay Bangigaaga.
9. Maxay cadadka ka muuqdo koontadeyda uga yartahay lacagtaan dhigtay?
Tani waxay noqon kartaa sabab la xiriirto dalacaadyada dheeraadka ah ee uu sameeyay bixiyahaaga lacag bixinta ama bangiga. Xaaladaha noocaas ah, waa inaad wixii sharraxaada kala xiriirta cidda lacag bixinta kaaga shaqaysay? Tan waxa sidoo kale sabab u noqon karta qidmooyinka lagu dalacay markii qaabka lacag bixinta ee la isticmalay uu yahay wareejinta bangiga. Fadlan wixii sharaxaado dheeraad ah booqo bogga Lacag dhigashada iyo La bixista.
10. Miyaad qaadaan qimo lacag dhigasho?
gt.io kuma dalacdo Macaamiisha wax qidmooyinka Lacag dhigasho ah, marka laga reebo xaalada wareejinada Bank Wire, taas oo kala duwanaan karto iyadoo ku xirnaan karta xaddiga lacagta la dhigtay. Fadlan ka booqo ciwaanka wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan Lacag dhigashada iyo kala bixitaanada.
11. Miyaad qidmad ka qaadaan lacag la bixista?
gt.io kuma dalacdo qidmad lacag la bixiseed macaamiisha, marka laga reebo xaalada wareejinada Bank Wire, taas oo kala duwanaan karto iyadoo ku xirnaan karta xaddiga lacagta la dhigtay.
12. Sidee ayaan lacag uga wareejin karaan hal akoon ganacsi una wareejin karaa mid kale?
Si aad sidaas u sameysid waa inaad marka koowaad ka soo wareejisaa akoonkaaga ganacsi oo geysaa ewallet, dabadeena ka sii wareejisaa ewallet-kaaga una wareejisaa akoonka ganacsi ee aad rabto.
13. Miyay jiraan wax xadeyno ah oo saaran wareejinada gudaha ah.
- Waxaad lacag u kala wareejin kartaa ewallet-ka iyo akoonada ganacsi ee isku lacagta ah.
- Ma jiraan wax xadeyna sare ama hoose oo saaran wareejinada gudaha.
- Keliya waxaad lacag ka soo wareejin kartaa una wareejin kartaa eWallet-kaaga/ akoonadaada ganacsi.
14. Miyaan u wareejin karaa lacago eWallets markii aan haysto boosas furan?
Waad ku wareejin kartaa lacagaha haddii aad haysatid boosas furan oo boggaada ah. Fadlan ogow in heerkaaga deynta shirkada dullaalka kadib ka jarida cadadka aad codsatay waa inuu la mid ahaadaa ama ka badnaanadaa 110%.
15. Illaa intee ayay qaadataa in la dhammaystiro lacag wareejin gudeed?
Wareejinada Gudaha waxaa la sameeyaa isla markiiba.
Haddii lacala aad boosas furan akoonka ganacsi ka leedahay oo aad rabtid inaad bilowdid wareejinta, waa inaad hubisaa inaad haysatid deynta shirkada dullaalka si aad joogteysid boosaska furan.
16. Sidee ayaan ugala baxaa lacag koontadeyda?
Marka koowaad, fadlan hubi in barafaylka akoonkaaga iyo habka lacag la bixintuba xaqiijisan yihiin. Kadib raac tallaabooyinkan hoose:
1. Riix badhanka lacag la bixista ee ku yaala gudaha aagaaga ilaashan.
2. Geli cadadka aad rabtid inaad la baxdid.
3. Dooro ewallet ka aad rabtid inaad lacag kala baxdid oo buuxi godadka muhiimka ah.
Fadlan hubi inaad ka warqabto xaddiga ugu yar ee lacaga lagula bixi karo habka lacag bixinta ee kor ku sharraxan Lacag dhigasho iyo la bixis.
17. Intee waqti ah ayay qaadataa dhammaystirka lacag la bixista?
Shaqada lacag la bixistu waxay qaadan kartaa inta u dhaxeyso dhowr daqiiqo iyo 24 saacadood, hase ahaatee waqtiga loo baahan yahay si lacagta loogu soo wareejiyo akoonkaaga waxay ku xirnaan doontaa nooca lacag bixinta ee la isticmaalay. Markii la dhammaystiro, waxaa heleysaa i-meel xaqiijin ah.
- Bank Wires: U dhaxeysa 2-5 Maalmo Ganacsiyeed
- Dhijitaalka/Wallet-yada Elegtarooniga ah: Qaarkood waa isla markiiba qaarna 1 Maalin Ganacsi, waxayna ku xiran nooca wallet-ka Dhijitaalka/Elegtarooniga ah
Haddii ay jiraan wax cillad ah ku timaada codsigaaga lacag la bixista waxaanu kugula soo xiriireynaa 24 saacadood gudahood annagoo kuu haynaa macluumaad dheeraada oo arrinta la xiriira.
18. Miyaan lacag kula bixi karaa qaab ka duwan sidaad lacagta markii hore u soo dhigtay?
Lacag la bixisyada waa in loo sameeyaa qaab u dhigma lacag dhigashada iyo qaabkii loo dhigtay.
Kala bixitaanadaada waa in lagu wareejiyaa isla Kaarka Bangiga/Deynta, Wallet ka Dhijitaalka, Koontada Bangiga ee loo isticmaalay Lacag dhigashada.
- Lacag dhigashada koowaad – 1,000 USD --> Kaarka Deynta *5555
- Lacag dhigasho 2aad – 500 USD --> Kaarka Deynta *6666
- Lacag dhigasho 3aad - 500 USD --> Sticpay
- Wadarta lacagta la dhigay: 2,000 USD
- Lacag la bixista koowaad – 500 USD –> waa in lagu sameeyaa iyada oo la isticmaalayo Kaarka Deynta *5555
- Lacag la bixista 2aad - 1,300 USD --> 500 USD waa in lagula baxaa iyada oo la isticmaalayo Kaarka Deynta *5555, 500 USD waa in lagula baxaa iyada oo la itsicmaalayo Kaarka Deynta *6666 iyo 300 USD waa in lagula baxaa iyada oo la isticmaalayo Sticpay.
- Wadarta lacag la bixista: 1,800 USD
19. Haddii aan sameeyo faa'ido, miyaan kala bixi karaa lacagahaas dhinaca kaarkeyga Bangiga/Deynta?
Maya, lacagta lagula baxay Debit/Credit kaadh waxay keliya le'ekaan kartaa xaddiga markii hore la dhigtay. Waad codsan kartaa inaad kula baxdid lacagaha dheeraadka/xad dhaafka hababka soo socda:
- Waletyada Dhijitaalka/Korontada (tusaale Sticpay). Ciwaanka i-meelka waletka dhijitaalka/korontada waa inuu la mid noqdaa kii loo adeegsaday diiwaangelint. Haddii kuwani kala duwan yihiin, waa inaad keentaa caddayn wadata waraaq/sawir oo aad ku caddeynayso inaad akoonka leedahay taasoo magacu la mid yahay kii diiwaangelinta.
-Bangi Lacag ku Xawilis. Magaca qaataha waa inuu la mid noqdaa magaca loo isticmaalay diiwaangelinta.
20. Martarka qaar, markii aan ugu shubo hantida dhijitaalka, waxaan ogaadaa in cadadka soo dhacay ka yaryahay midka la dhigay. Sababte ayaa keentay taas?
Tan waxa sababay qidmad yar oo khasaba in la qaado mar kasta oo fal-ganacsiyeed kiribto la sameeyo. Kuwani ma ahan qidmooyinka gt.io. Kuwani waa qidmad dadka lacagta kiribto kaaransiga sameeya ay qaataan si fal-ganacsiyeedku u dhaco, taasoo aad ku arki karto fal-ganacsiyeedka baloog-jayn.
21. Maxaan sameeyaa haddii aan rabo inaan ka laabto lacag la bixistayda?
Haddii lacag la bixista aan weli la dhammaystirin waxaad kaga laaban kartaa Bogga Macaamiisha. Haddii badhinka ka laabashadu muuqdo, waxay la macno tahay waad ka laaban kartaa lacag la bixista.
Si kastaba ha ahaatee ha haatee, fadlan ogsoonoow in ka laabashadu aanay ooli doonin hadii lacag la bixista uu xafiiska-gadaaleed horey ka sii dhammaystiray.
22. Waa maxay Aqoonsiga Fal-ganacsiyeed/TxID ee ku jira fal-ganacsiyeedka kiribto kaaransiga?
Dhammaan fal-ganacsiyeedyada kiribto kaaransigu waxay sameeyaan Aqoonsi Falganacsiyeed (mid loo yaqaan TxID ama hash ama fal-ganacsiyeed hash). TxID gan waa aamin in la wadaago, wax tafaasiil shaqsi sida magac ama iimayl kama muuqdaan. Waxay muujisaa waletyada ee/ku luglahaanshaha wareejinta ee dhacday, cadadka, qidmooyinka wareejinta macdanta walboo, taariiqda iyo saacada waa laga baaran dagay. Waxay si gaar ah u qeexdaa wareejinta.
23. Sidee ayaan u fiiriyaa Aqoonsiga fal-ganacsi(TxID) ee Lacag dhigasho ama Kala bixitaanka Hantida dhijitaalka?
Bogga Macmiilkaaga, waxaad xulan kartaa Wargelinada ka imaanayo dalabka kore, kadib aadayo Taariiqda Fal-ganacsiyada waletka-E, halka aad ka heli kartid ciwaanka helaha wareejinta aad raadineysid adiga oo riixayo badhanka sharaxaadaha ee wareejintaas.
Fadlan xasuusnoow in amni daraadii aanu u beddelno ciwaanka wallet-ka ee aad lacagta ku hesho si joogto ah.
24. Shabakadee ayaad u isticmaashaa Fal-gancsiyeedyada USDT?
Waxaa jiro 2 shabakado oo loo isticmaalo lacag dhigashada/kala bixitaanka USDT. Mid waxa loo yaqaan OMNI iyo midka kale ERC-20.
gt.io isticmaalaa OMNI iyo ERC-20.
25. Halkee ayaan ka heli karaa warbixin ku saabsan Dabaajiyada iyo Kala bixitaanka ee websaydkaaga?
Waxaad ka heli kartaa warbixin badan oo labadaba ah bogga Dabaajiyada iyo Kala bixitaanada.
26. Halkee ayaan ku arki karaa sharaxaadaha dabaajiyadeyda/kala bixitaanadeysa/wareejinada iyo taariiqda?
Waxaad ku arki kartaa sharaxaadaha buuxo ee wareejinadaada aagaaga illaalsan (Bogga Macaamiisha) adiga oo raacayo tallaabooyinka hoose:
1. Dooro badhanka Wargelinada ee ku yaalo liiska
2. Dooro Taariiqda Wareejinta eWallets oo lagu eegayo dhigashooyinka iyo kala bixitaanada.
3. Dooro Taariiqda Wareejinta Koontooyinka si aad u aragtid wareejinada soo galay iyo ka baxay koontooyinkaaga ganacsiga.
27. Waxaan codsaday inaan lacag kula baxo kaadhkayga daynta balse waxaan keliya qayb lacagtii ka mid ah intii kalena waxa lagu ceshay waalatkaygii. Maxaa tan qayb ahaan loo ogolaaday?
Lacag bixiyayaasha loo adeegsado dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee kaadhka dayntu waxay leeyihiin shuruudo iyo xaddidaado ogolaanaya in lacag la bixistu guulaysato. Waxa jira mar xaddiga lala baxay si buuxda loo soo saaro, halka mararka qaarna qayb ahaan uun la ogolaado. Sida Shuruucdayada iyo Shuruudahayaga 15.10.2 qabaan hadii tani dhacdo waxa lagaa dalbanaya inaad qaddarka haray kula baxdo waddo tan ka duwan (kaadh kale oo daymeed aan ahayn) tusaale ahaan, SticPay ama akoon bangi oo aad ku xawilato.